अब ५ मिनेटमै फुल चार्ज हुने, मोबाइल तथा ल्यापटपको ब्याट्रीमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त | Khabar Sadan खबर सदन
Home अर्थ अब ५ मिनेटमै फुल चार्ज हुने, मोबाइल तथा ल्यापटपको ब्याट्रीमा ठूलो उपलब्धि...
अब ५ मिनेटमै फुल चार्ज हुने, मोबाइल तथा ल्यापटपको ब्याट्रीमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त
मोबाइल तथा ल्यापटपमा प्रयाेग गरिने ब्याट्रीमा अनुसन्धानकर्मीले उल्लेख्य उपलब्धि हात पारेका छन् । जसका कारण अब यी डिभाइसको ब्याट्री फुल चार्ज हुने बढीमा ५ मिनेट लाग्ने जनाइएको छ ।
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्मीले लिथियम–आयन ब्याट्रीभित्र हेर्नका लागि ‘लो–कस्ट टेक्निक’ फेला पारेका हुन् । उक्त टेक्निक बुधबार ‘नेचर’ नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ । यसमार्फत अनुसन्धानकर्मीलाई ब्याट्रीको चार्जिङ साइकलका लागि ‘स्पिड लिमिट’ का साथै अन्य धेरै आवश्यक कुराको मापन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अनुन्धानकर्मी डा. आस्यक रोयले लिथियम–आयन ब्याट्रीको स्पिड लिमिट चार्ज भइरहेको समय र नभइरहेको समयमा फरक-फरक हुने बताएका छन् ।
उनले जब ब्याट्री चार्ज भइरहेको हुन्छ, त्यो समयमा पनि लिथियम–आयनले कति गतिमा पार्टिकल्स पास गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराले ब्याट्री चार्ज गर्न लाग्ने समय निर्धारण हुने बताए ।
Previous articleकुन भाषा पहिलो भाषा हो जुन मानिसहरूले बोल्छन्
Next articleकहिलेकाहीं हातखुट्टा किन निदाउँछ ? यस्तो हो कारण